The Touch of God - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
lahatsoratra > Fiainana miaraka amin'Andriamanitra > Ny fikasan'Andriamanitra
Tsy nisy olona nikasika ahy nandritra ny dimy taona. Tsy misy olona. Tsy fanahy. Tsy ny vadiko. Tsy ny zanako. Tsy namako. Tsy nisy olona nikasika ahy. Nahita ahy ianao. Niresaka tamiko izy ireo, nahatsapa fitiavana tamin'ny feon'izy ireo aho. Nahita fiahiahy teo imasony aho. Saingy tsy tsapako ny mikasika azy. Naniry mafy ny fahita aminareo rehetra aho. Fandraisana tanana. Famihinana mahavariana. Tehina eo amin'ny soroka mba hisarika ny saiko. Oroka eo amin'ny molotra. Tsy nisy intsony ny fotoana toy izany teo amin'ny tontoloko. Tsy nisy olona nidona tamiko. Inona no azoko omena raha nisy naneso ahy, raha toa ka tsy nanao fandrosoana firy tamin'ny vahoaka aho, raha toa ka nitifitra iray hafa ny soroko. Saingy tsy mbola nisy izany nanomboka tamin'ny dimy. Ahoana no mety hitranga raha tsy izany? Tsy navela teny an-dalana aho. Na ny raby aza dia nanalavitra ahy. Tsy navela niditra tao amin'ny sinagoga aho. Tsy noraisina tao an-tranoko akory aho.
Herintaona, nandritra ny fijinjana, dia nanana fahatsapana fa tsy afaka mihazona ny fijinjako amin'ny heriko hafa aho. Toa mafy ny fako. Tao anatin'ny fotoana fohy dia mbola afaka nihazona ny fizakana aho, saingy zatra ny nahatsapa izany. Rehefa nifarana ny ora fiasana lehibe dia tsy mahatsapa na inona na inona intsony aho. Ny tanana nihazona ny fijinjana dia mety ho an'ny olon-kafa ihany koa - Tsy mahatsapa mihitsy aho. Tsy nilaza na inona na inona tamin'ny vadiko aho, fa fantatro fa niahiahy izy. Ahoana no nahalany azy raha tsy izany? Notazomiko foana ny vatako, toy ny vorona naratra. Indray tolakandro dia natondrakay teo anaty dobo rano aho satria te hanasa ny tavako. Lasa mena ny rano. Nandriaka ny rantsan-tanako, na dia mahery setra aza. Tsy fantatro akory hoe naratra aho. Ahoana no fomba nijanonako? Amin'ny antsy lava? Teo amin'ny vava vy maranitra ve ny tanako? Azo inoana fa tsy nahatsiaro na inona na inona aho. Eo amin'ny lambanao ihany koa, dia nibitsibitsika moramora ny vadiko. Fa izaho no tao aoriako. Talohan'ny nijereny azy dia nijery takelaka mena-mena tamin'ny akanjoko aho. Nijoro teo ambonin'ny dobo filatroana nijery teo an-tanako aho. Fantatro fa niova mandrakizay ny fiainako. Tokony handeha hiaraka aminao amin'ny pretra ve aho? Tsia, nisento aho. Mandeha irery aho. Nitodika aho ary nahita ranomaso teo imasony. Ny zanakay vavy telo taona no nijoro teo akaikiny. Nitsentsitra aho, nibanjina ny tavany ary nanindrona antsy ny takolany. Inona no azoko nolazaina? Nijoro teo aho ary nijerijery ny vadiko indray. Notendreny ny soroko ary ny tànako salama no nokasihiko taminy. Izany no ho fifandraisanay farany.
Tsy nikasika ahy ny pretra. Nijery ny tanako izy, izay nofonosina lamba fotsiny. Nijery ny tavako izy, izay maizina ankehitriny. Tsy tezitra tamiko izay nolazainy tamiko. Manaraka ny toromarika nomeny ihany izy. Manarona ny vavany izy, maninjitra ny tanany, miroso amin'ny tanana. Maloto ianao, hoy izy tamiko. Tamin'ity fanambarana tokana ity dia namoy ny fianakaviako, ny toeram-pambolena, ny ho aviko, ny namako aho. Nanatona ahy ny vadiko, teo am-bavahadin'ny tanàna, nitondra kitapo misy mofo sy vola madinika. Tsy nilaza na inona na inona izy. Nifamory ireo namana sasany. Teo imasony vao nahita ny zavatra hitako tamin'ny masoko hatramin'ny voalohany: feno fangorahana mahatsiravina. Rehefa nandray dingana aho dia nihemotra izy ireo. Ny halan'izy ireo amin'ny aretiko dia lehibe kokoa noho ny fiahiany ny foko - koa nametra-pialana izy ireo, toy ny olon-drehetra izay hitako hatrizay. Ohatrinona ny nolavin'ireo izay nahita ahy. Nanova ny tanako ny habokana dimy taona. Tsy hita ny fantsom-paty ary misy ampahany amin'ny sofina sy oroko ihany koa. Rehefa nahita azy ireo aho dia nisy raim-pianakaviana hikarakara ny zanany. Nisaron-tava ny reny. Nisy ankizy nanondro rantsan-tanana tamiko ary nibanjina ahy. Ny fika amin'ny vatako tsy afaka manafina ny feriko. Ary ny saron-tava eo amin'ny tavako tsy afaka manafina ny hatezerana amin'ny masoko koa. Tsy nanandrana nanafina izany aho. Andro firy no nofenoiko ny totohondry naratra nanohitra ny lanitra mangina? Inona no nataoko ho mendrika an'ity? Nefa tsy tonga akory ny valiny. Misy mihevitra fa nanota aho. Misy kosa mihevitra fa nanota ny ray aman-dreniko. Ny hany fantatro dia ampy ahy ny zavatra rehetra, hatrizay natory tany amin'ny zanatany, avy amin'ny fofona ratsy. Efa ampy ny totohondry voaozona izay mila feheziko amin'ny vozotro mba hampitandremana ny olona momba ny fanatrehako. Toy ny hoe mila izany aho. Ny maso iray dia ampy ary nanomboka ny antso: Impure! Maloto e! Maloto e!
Herinandro vitsy lasa izay dia tsy sahy nandeha an-dalambe nankany amin'ny vohiko aho. Tsy nikasa hiditra tao an-tanàna akory aho. Tiako ny hijery fomba fijery hafa. Zahao ny lavitra ao an-tranoko. Ary angamba tsy nahy nahita ny tarehin'ny vadiko. Tsy nahita azy aho. Fa nahita ankizy sasany nilalao an-tsaha. Niafina tao ambadiky ny hazo aho ary nijery azy ireo haingana dia nitsambikina. Faly er ny tavan'izy ireo ary tena nahitana ny fihomehezana fa tsy boka aho nandritra ny fotoana fohy, kelikely. Mpamboly aho. Izaho dia ray. Lehilahy aho. Nahazo ny hafalian'izy ireo aho, niondrika avy tao ambadiky ny hazo, nanenjana ny lamosiko ary nifoka rivotra lalina ... ary nahita ahy izy ireo. Hitan'izy ireo talohan'ny nahitanako nisotro ronono. Nikiakiaka izy ireo ary nandositra. Na izany aza, nisy iray nihemotra tao ambadiky ny hafa. Nijanona ny iray ary nijery teo amin'ny làlako. Tsy afaka milaza mazava aho, nefa mieritreritra aho, eny, tena mieritreritra aho fa zanako vavy. Heveriko fa nitady an-drainy izy.
Izany fijery izany no nahatonga ahy nandray ny dingana noraisiko androany. Mazava ho azy fa tsy nisy fiadanany. Mazava ho azy fa nampidi-doza izany. Fa inona no tsy maintsy ho very? Niantso ny tenany ho zanak'Andriamanitra izy. Izy no handre ny fitarainako ary hahafaty ahy, na hohenoiny ny fangatahako ary hahasitrana ahy izy. Izay no tao an-tsaiko. Nanatona azy aho amin'ny maha-lehilahy sarotra. Tsy finoana no nahatonga ahy, fa tezitra be. Andriamanitra no namorona izao fahantrana izao amin'ny vatako ary hanasitrana azy io na hamarana ny fiainako izy.
Saingy nahita azy aho ary rehefa nahita azy dia niova aho. Azoko ambara fotsiny fa ny maraina any Jodia dia tena mamy sy be ny fiposahan'ny masoandro ka tsy eritreretinao akory ny hafanan'ny andro sy ny fanaintainan'ny taloha. Rehefa nijery ny tavany aho, dia toy ny nahita maraina tany Jodia. Talohan'ny nilazany na inona na inona dia fantatro fa tsapako miaraka amiko. Tamin'izay dia fantatro fa halany toy ny taloha ny fankahalany - tsy izany intsony. Lasa ny fahatokiako ny hatezerako, ny hatezerako lasa fanantenana.
Niafina tao ambadiky ny vatolampy aho, nijery azy nidina avy an-tendrombohitra. Vahoaka marobe no nanaraka. Niandry aho mandra-pahatongany dingana vitsivitsy hanalavitra ahy, dia nivoaka aho. Mpampianatra ô! Nijanona izy ary nizaha ny lalana nitarika ahy, toy ny hafa tsy tambo isaina. Raiki-tahotra ny vahoaka. Nanarona ny sandriny ny olona rehetra. Nentin-jaza ireo ray aman-dreniny. "Impure!" Nisy niantsoantso. Tsy azoko tezitra aminy izy ireo. Izaho no nahafatesako mandeha. Nefa zara raha henoko izy. Zara raha nahita azy aho. Nahatratra an'arivony ny fahitako azy. Tsy mbola nahita ny fangoraham-pony anefa aho. Nametra-pialana ny rehetra afa-tsy izy. Nanatona ahy izy. Tsy nihetsika aho.
Hoy fotsiny aho: Tompoko, afaka manasitrana ahy ianao raha tianao. Raha nanasitrana ahy tamin'ny teny iray izy, dia ho faly aho. Fa tsy niresaka tamiko fotsiny izy. Tsy ampy ho azy izany. Nanakaiky ahy izy. Nikasika ahy izy. "Mila ... aho!" Ny teniny dia be fitiavana toa ny mikasika azy. Salama tsara! Nandeha namakivaky ny vatako toy ny rano namaky ny saha karakaina ny herinaratra. Tamin'izay fotoana izay ihany dia nahatsapa hafanana aho izay nisy ny fahamaimaizana. Nahatsapa tanjaka tamin'ny vatako mahia aho. Nanitsy ny lamosiko aho ary nanangana ny lohako. Niatrika azy aho izao, nijery ny tarehiny, nifanatrika. Nitsiky izy. Notsatohany an-tànany ny lohako ary notaritaritiny mafy aho mba hahatsapako ny fofonainy mafana ary hitako ny ranomasony. Ataovy izay tsy hilazanao amin'olona na iza na iza, fa mankanesa any amin'ny pretra, asaivo manamafy ny fanasitranana izy ary manaova ny sorona notendren'i Mosesy. Tiako ho fantatr'ireo tompon'andraikitra fa mihevitra ny lalàna ho zava-dehibe aho. Handeha mankany amin'ny mompera aho izao. Hiseho aminy aho ary hamihina azy. Hiseho amin'ny vadiko aho ary hamihina azy. Entiko eny an-tsandriko ny zanako vavy. Ary tsy hadinoko mandrakizay izay sahy nanohina ahy. Afaka nanasitrana ahy tamin'ny teny iray izy. Saingy tsy te hanasitrana ahy fotsiny izy. Te hanome voninahitra ahy izy, hanome lanja ahy, handray ahy hiaraka aminy. Alaivo an-tsaina hoe tsy mendrika ny mikasika ny olombelona fa mendrika ny kitikitihin'Andriamanitra.
Max Lucado (Raha manova ny fiainanao Andriamanitra!)